यस्तो छ बिहेपछि महिलाहरुको हिप र स्तन बढ्नुको रहस्य! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > यस्तो छ बिहेपछि महिलाहरुको हिप र स्तन बढ्नुको रहस्य!
admin January 8, 2021 January 8, 2021 जीवनशैली, रोचक	0
विशेषगरि बिहेपछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ। उनीहरुको बोलीचालीदेखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख सकिन्छ। साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ। सामान्यतया अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हिप र स्तनको आकारमा धेरै परीवर्तन भएको देख्न सकिन्छ ।
हाम्रो देशमा सामान्यतया महिलाहरु सानै उमेरमा शारीरिक विकास नभएकै बेला बिवाह गर्छन त्यस कारणले पनि बिहेपछी हिप र चेस्टको साइज बढ्नु अथवा ठूलो हुनु सामान्य मानिन्छ। तर अमेरिकामा एक सोधकर्ताहरुले भने भिन्नै तथ्य पत्ता लगाएका छन् ।
सोधकर्ताहरुको तथ्य अनुसार जुन महिलाले एक दिनमा पटक पटक यौन सम्बन्ध राखेका थिए उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा अलिकति बढी भएको पाएका थिए। साथै हिपको आकार ठूलो भएका महिलाहरुलाई गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने समेत एक अनुसन्धानले बताइएको थियो।
अनिन्द्रा: बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरूको सुत्ने समय र दैनिकी बद्लिन्छ । थपिएको जिम्मेवा री बहन गर्दा गर्दै सुत्नको लागि पर्याप्त समयको अभावमा धेरैपटक अनिदो बस्नु पर्ने हुनसक्छ । कम्तिमा ७ घंटा नसुत्नुको कारणले महिलाहरूको तौल बढ्ने गर्दछ।
हर्मोनको परिवर्तन: बिहेपछि परिवर्तन हुने जिवनशैली तथा चाहानाका कारण महिलाहरूको शरिरमा हर्मोन तिब्र रुपमा परिवर्तन गराउँछ, जुन तौल बढाउन जिम्मेवार रहन्छ।
उमेरको असर: विभिन्न अनुसन्धानका अनुशार बिहेपछि बढ्दो उमेरसँगै महिलाहरूको मेटाबोलिजमको दर कम हुदै जान्छ। जस कारण शरिरमा भएको बोसोको घट्ने प्रकिया कम हुन्छ र तौल बढ्छ ।
सामाजिक दबाब कम हुनु: महिलाको लागि बिहे अघि राम्रो देखिन तथा राम्रो पति पाउनका लागि आफ्नो शरिरको फिटनेसलाई विशेष ध्यान दिएका हुन्छन्। तर बिहे पछि यो दबाब कम हुन्छ, जसका कारण महिलाहरु आफ्नो फिटनेसमा ध्यान दिदैनन् र तौल बढ्न जान्छ।
धेरै टिभी हेर्नु: प्रायजसो बिहेपछि हाम्रो समाजमा श्रीमान कामका लागि बाहिर जान्छन भने श्रीमती गृहिणीको रुपमा घरमै बस्ने प्रचलन रहेको छ। दिउसोको खाली समयमा टेलिभिजन हेर्नु उनीहरुको सामान्य दैनिकी कुरा हो। जसबाट उनीहरुको शरिर शारिरिक रुपले निष्क्रिय रहने हुदाँ मोटोपन बढ्छ।
टेन्सन बढ्नु: बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरुलाई नयाँ वाताबरणमा घुलमिल गर्न असहज हुन्छ। यसले तनाब बढ्छ र साथसाथै तौल पनि।
गर्भवती अवस्था: सामान्यतया बिहे भएको १९२ बर्षपछि धेरैजसो जोडीहरु सन्तान जन्माउने गर्दछन। महिला गर्भवती हुँदा आउने हर्मोनको परिवर्तन तथा चुस्त पोषणको कारणले मोटोपन बढ्ने गर्दछ।
लापर्वाही: बिहेअघि महिलाहरु आफ्नो खानपिनलाई नियन्त्रणमा राखेका हुन्छन्। तर बिहेपछि जिवनशैलीको कारण खानपिनमा खासै ध्यान दिन पाउदैनन् र तौल बढ्छ।
खानपिनमा परिवर्तन: बिहेपछि पतिको घरमा जस्तो खाना हुन्छ त्यस्तै खाना खानुपर्छ, धेरै जसोले ज्यादा फ्याट र मसलादार खाना खाने गर्दछन, यसले तौल बढाउँछ।
परिवर्तन: बिहेपछि पति र घरपरिवार अनुशारको रुटीन बन्ने गर्दछ । यसकारणले पनि महिलाहरु आफ्नो ध्यान राख्ने मौका पाउदैनन् र तौल बढ्न जान्छ।
*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
समाचार यात्रुवाहक बस फेरि भेरी नदिमा, एक जनाको शव निकालियो
ठुलो बच्चा जन्माउने होडबाजी जस्तै, केहि दिन अगाडिकाे ५ केजी रेकर्ड ब्रेक गर्दै जन्मियो भेरी अस्पतालमा ६ केजीकाे बच्चा